WebCatalog: isa webhu kunyorera pane yako system | Linux Vakapindwa muropa
ari Webhu kunyorera kuri kuwedzera kushandiswa nevashandisi Sezvo zvave zvangove zvakakosha kune vazhinji vedu, idzi mhando dzekushandisa Ivo vanotibvumidza isu kunakirwa webhusaiti sekunge yaive imwe sisitimu yesystem yedu.
Nokuda kweizvi Izvo zvinodikanwa kuve nezvinodiwa zvishandiso kuti ugone kumhanyisa aya mawebhu webhu uye kukwanisa kuvabatanidza vangangoita natively mune yedu system, nekuti nhasi nhasi ticha taura nezve application ichatibatsira neizvi.
1 Nezve WebCatalog
2 Maitiro ekuisa WebCatalog paLinux?
WebCatalog iyo application yatinozotaura nezvayo nhasiizvi ndeye multiplatform application Mune mamwe mazwi, inogona kumhanyisa paMacOS, Linux uye Windows.
Is yakagadzirirwa kumhanya akasiyana webhu kunyorera pane yedu system, kuwedzera kune izvo, WebCatalog inoshanda senzvimbo uko masevhisi akasiyana akaiswa muhwindo guru mune mamwe mazwi, sekunge yaive software centre.
WebCatalog Izvo zvichatibvumidza isu kufamba pakati peakasiyana webhu maapplication ayo aripo kushandiswa mukati maro uye ichatibvumidzawo kuti tivaise mumidziyo yedu
Kana tazviita, tinogona kuvhura ivo kubva pahwindo hombe uye kumhanya navo senge chero imwe software paPC yedu.
Maitiro ayo WebCatalog anomhanyisa mashandisiro edu ndeaya inoshandisa bhurawuza redu, ichizvibatanidza mukati maro seinjini yayo huru.
Asi zvakare isu tinopihwa mukana wekusarudza Juli, injini yakagadzirirwa WebCatalog, Yakavakwa neElectron technology.
Kana zvakadaro Iwo mafomu atinogona kuwana mukati meWebhu Catalog tinogona kuratidza:
Kiddle Cloud Reader
Mabhuku eGoogle Play
Facebook neFacebook Messenger
Uyu Iyo inogadziriswa, sezvo iine rutsigiro rwe proxy, script jekiseni, zvinotibvumidzawo isu kugadzira yedu yewebhu webhu, izvi zvinoitwa nekutibvumidza isu kuti titore chero webhusaiti kana webhu application uye tishandure kuita desktop desktop inomhanya mukati mega mudziyo.
Sezvambotaurwa, iyo application ndeye multiplatform, asi mune kesi yeLinux tine nzira mbiri dzekumisikidza.
Maitiro ekuisa WebCatalog paLinux?
Wokutanga wavo iri kunobva kodhi yekodhi yekushandisa iyo yatinofanira kuumbiridza muhurongwa kuti tikwanise kunakidzwa nechishandiso ichi.
Kune izvi isu tinofanirwa kutora kodhi yekodhi kubva chinotevera chinongedzo.
Imwe nzira yekumisikidza iri kuburikidza neAppImage, saka yedu system Iwe unofanirwa kuve nekwanisi yekuisa mashandisiro uchishandisa aya marudzi emafaira.
Mazhinji ekuparadzira Linux aripo anofanirwa kuisa aya marudzi emafaira, saka iyi nzira yekumisikidza haifanire kumiririra dambudziko.
Kune izvi isu tinofanirwa kurodha yazvino vhezheni yakagadzika yeWebhuCatalog kubva pane inotevera chinongedzo.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, isu tinofanirwa kuvhura terminal mune yedu system uye ita unotevera kuraira nako isu tichapa izvo zvinodiwa mvumo yekuuraya kune iyo faira ichangotorwa.
chmod a+x webcatalog*.AppImage
Kana izvi zvangoitwa, isu tinogona kubvunzwa kana tichida kubatanidza kunyorera kune yedu system, isu tine sarudzo yekubvuma kana kwete.
Kana iwe wakasarudza iyo sarudzo yekubatanidza unogona kuwana iko kunyorera mukati memenu yekushandisa iyo iwe yaunogona kuitisa.
Kana iwe ukasarudza iyo sarudzo yekusabatana iwe unofanirwa kumhanyisa iyo application kubva kuAppImage faira kubva kuchiteshi kana kudzvanya pairi uye ichamhanya.
Izvo zvakakosha kuti uchengete iyo faira ichingoteedzerwa kubvira iko iko kunyorera, kuve mune iyi mhando yemafomati, inomhanya munzira yakasarudzika kubva kuhurongwa, saka zvese zvaunoda kuti uzviite zviri mukati meiyo faira.
Chirongwa ichi chine makuru maviri tabo: imwe inonzi »Start«, kwatinogona kuwana zvese zviripo zvinoshandiswa, uye imwe inonzi »Yakaiswa» uko dzese dzatakatogadza dzichaonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » WebCatalog: isa webhu kunyorera pane yako system
Iyo yekumisikidza nzira muUbuntu 18.04 inondipa kukanganisa:
Gtk-Meseji: 11: 07: 59.262: Yakundikana kurodha module "canberra-gtk-module"
Kuende (KUE) akadaro
David, ini ndichakuudza kuti chirongwa chakatomiswa, ndakachishandisa asi ndakazoona iyo nhau
Pindura kuna Nasher_87 (ARG)
PulseAudio 12 yakaburitswa ine zvakawanda zvakagadziridzwa